COVID-19: Mijanona tsy manidina avy any Sal mankany Washington ny Cabo Verde Airlines
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » COVID-19: Mijanona tsy manidina avy any Sal mankany Washington ny Cabo Verde Airlines
Seranam-piaramanidina Cabo Verde nampiato vonjimaika ny sidina avy any Cabo Verde mankany Washington noho ny fangatahan'ny mpanjifa nihena be nateraky ny olana ara-pahasalamana manerantany mifandraika amin'ny COVID-19. Ny fampiatoana dia napetraka manomboka amin'ny 8 martsa ka hatramin'ny 31 mey 2020. eTurboNews tatitra, ity sidina ity dia natomboka tamin'ny volana desambra tamin'ny taon-dasa.
Misy fiantraikany amin'ny kaompaniam-pitaterana manerantany ny valanaretina virus amin'izao fotoana izao. Vokatry ny fipoahana dia nihena be ny fangatahan'ny mpandeha. Vokatr'izany, ny orinasam-pitaterana an'habakabaka dia nampihena ny fandaharam-potoanan'ny sidina izay misy fiatraikany amin'ny Cabo Verde Airlines.
Ny Cabo Verde Airlines dia manara-maso akaiky ireo toerana itodiana ireo izay misy ny fiatraikany amin'ny COVID-19, ary ny mpandeha voakasiky ny fanafoanana ny sidina dia hifandray mba hanomezana izay fiovana ilaina amin'ny fivezivezena. Ireo izay namandrika amin'ny alàlan'ny maso ivoho dia hifandray amin'ny masoivohony manomboka amin'ny 9 martsa, na afaka manatona ny maso ivoho fizahan-tany izy ireo.
Hatramin'izao, tsy mbola misy tranga COVID-19 voamarina any Cape Verde. Cabo Verde Airlines dia mihevitra fa ny Nosy Sal sy ny nosikely dia toeram-pialofana azo antoka ho an'ny mpandeha, ary ny seranam-piaramanidina dia hanohy hanompo toerana hafa mifanaraka amin'ny fangatahan'ny tsena.
Ny orinasa dia efa namoaka drafitra tsy azo ihodivirana ho fiarovana ny mpandeha indray ao amin'ny tranonkalany ary manohy manara-maso ny valanaretina sy ny tolo-kevitry ny WHO manerantany mba hamerenana amin'ny laoniny ny asa mahazatra.
Fanairana Coronavirus manan-danja avy amin'ny United Airlines: Raha marary ianao - mijanona ao an-trano
Coronavirus any Hawaii: Tsy mbola manaparitaka vaovao ho an'ny mpitsidika sy fizahan-tany
Tsy tapaka ny dia mankany Seychelles na eo aza ny fepetra hentitra momba ny fahasalamana